Ukusetyenziswa Kweyeza Ngexesha Lokukhulelwa
IFomula yokuQala yokuQala: Kwenzeka ntoni ngeF1 Pit Stop
NguJonathan Noble, UMark Hughes
Ukuma emngxunyeni yenye yezona zinto zixineneyo nezinomdla kwiGrand Prix okanye enye indlela yokubaleka. Ngapha koko, imidyarho yeemoto zihlala ziphumelela kwaye zilahlekile ngenxa yokuma kwemingxunya kunye neqela labasebenzi. Kwimizuzwana nje embalwa inani elikhulu lezenzo zenziwa ngabasebenzi beFomula enye. Apha ziqhekekile.
Umzobo 1: Ukujonga okwesibini ngemizuzwana kwindawo yokumisa umngxuma.
Inkqubo yangaphambili: Nje ukuba izicwangciso zobuchule zivumelene ukuba umqhubi uza kumisa nini emngxunyeni kunye nexesha elicetywayo le-stint elandelayo, isixhobo somqhubi sepetroli sicwangcisiwe ukuhambisa isixa esifanelekileyo samafutha afunekayo.
nini ukuthatha i-suboxone
Ixesha: Injineli yomdyarho womqhubi imxelela ngonomathotholo, ngesiqhelo kwithanga elandulelayo, ixesha lokuya emngxunyeni. Kwangelo xesha, umphathi weqela-ephulaphule lonke unxibelelwano lwerediyo yeqela-ukorobha abasebenzi bomhadi womqhubi, abaqokelela izixhobo zabo kunye namavili kwaye basuke kwigaraji bangene kwifaskoti yomngxuma ophambi kwegaraji. Inkqubo ye- indoda ye-lollipop - ilungu leqela eline-carbon-fiber lollipop enkulu-izitishi ngokwakhe ngokuhambelana nalapho impumlo yemoto iyakuma kwaye ibambe i-lollipop yakhe ngqo kwindlela yomqhubi, imnike isikhokelo esibonakalayo ngokucacileyo kwindawo yakhe yokumisa ngqo.
Ukungena kwendlela yomngxuma: Umqhubi ungena emngxunyeni womgodi ngesantya esipheleleyo sokubaleka kodwa uzisa isantya ezantsi kumda wesantya somgaqo womngxuma we-80 km / h (60 km / h kumgaqo oqinileyo womngxuma waseMonaco) ngaphambi kokuba awele umgca omhlophe obonisa ukuqala yesantya somda wendawo. Njengokuba ewela umgca, wenza umngxuma wesantya somngxuma onomda othintela imoto ukuba inganyuki ngaphezulu kwesantya. Ukukhetha i-limiter ngokuzenzekelayo pops kuvule i-pet filler flap.
Nangona umda we-pit lane limiter unceda, umqhubi nguye onoxanduva lokuba phantsi komda wesantya njengoko ewela umgca ongena emigodini. Umda uthintela kuphela imoto ukuba ibaleke ngaphaya kweso santya sele sele ingezantsi kwayo.
Ukubetha amanqaku: Umqhubi umisa imoto kwindawo efanelekileyo. Xa imoto iyema, indoda elolipop yehlisa ilollipop yayo phambi komqhubi. Okubhalwe ebusweni be-lollipop ligama elithi iziqhoboshi ukukhumbuza umqhubi ukuba agcine unyawo kwi-brake pedal ukuze amavili angajiki njengoko amantongomane evili ekhululekile. Umqhubi kufuneka ayithintele nasekumiseni i-injini, abanokuthi bathambekele kuyo.
Kubalulekile ukuba umqhubi eme kanye kwindawo apho abasebenzi bakhe bemlindele. Ukusilela ukwenza oko kuthetha ukuba abasebenzi kufuneka barhuqe izixhobo zabo kunye namavili ukuya emotweni, bexabisa imizuzwana ebalulekileyo. Ukunceda umqhubi abethe uphawu, indawo yokumisa kumavili angaphambili nangasemva kunye nendoda ye-lollipop iphawulwe nge-tape enamathele kakhulu.
Umphambili: Ukuchopha ecaleni kwendoda elolipop yindoda yangaphambili yejack. Ngokukhawuleza xa imoto imisa ubeka i-jack yakhe phantsi kwempumlo yemoto kwaye uyiphakamise emoyeni. Ijack yenziwe nge-tubing yentsimbi kwaye ineqhosha lokukhupha ngokukhawuleza ukubuyisela imoto ezantsi.
Kwiimeko ezininzi imoto ifuna kuphela ukujija ijikeleze ii-intshi ezimbini nangona iindlela ezithile umngxuma usekuthambekeni kwaye ukuphakama kwe-jacking kufuneka kwandiswe, okwenziwa ngokunika i-jack amavili amakhulu. Kuba amaqela aneempumlo ezahlukileyo ezinikezela ngeempawu ezahlukileyo zomoya, kufuneka abe neejacks ezithile ukuze zilungele bona, ngamanqaku ngokukodwa okulinganisa.
Umva wejack: Indoda yangemva kwejack kufuneka ilinde ide idlule kuye imoto ngaphambi kokungena kwindawo. Ubeka ibhatyi yakhe phantsi kwemoto kwaye anyuse umva wemoto.
I-prednisone burst idosi ye-arthritis
Injini yokuqala: Ijack engasemva inesixhobo esifanelekileyo esifakwe kuyo ukuqala kwemoto. I-starter ikulungele ukubuyisela i-injini ebomini ukuba imoto iyabeka. Imoto inokuma ngenxa yempazamo yomqhubi okanye ingxaki ngebhokisi yebhokisi, i-clutch, okanye i-hydraulic system. I-starter ifakelwe isikhokelo esongezelelekileyo njengothintelo kwimeko apho imoto iye yema emva kokutsiba iinyawo ezimbalwa.
Ukutshintsha kwevili: Ivili ngalinye linamalungu amabini abasebenzi. Omnye usebenza umpu ocinezelweyo oqhutywa ngumoya osusa inati enye. Elinye lisusa ivili elidala kwaye lihambelana nelitsha. Indoda yompu iphinde ibambelele kwi-nut kwaye uyiqinise ijikeleze i-500 lb / ft (iiponti ngeenyawo). I-ivili nut kunye nesokethi umpu ukuba umazibuthe ukukhusela nut iwele emhlabeni. Yonke le nkqubo ithatha malunga nemizuzwana emithathu.
Ukuthintela amantongomane ukuba asebenze ngokukhululekileyo, icala lasekunene lemoto lisebenzisa imisonto esesandleni sokunene, icala lasekhohlo lemisonto emacaleni yemoto. Oku kuthetha ukuba imipu yecala lasekunene nelasekhohlo kufuneka lisebenze ngeendlela ezichaseneyo. Amaqela ahlala embala ikhowudi ukuba abonise ukuba yeyiphi. Indoda nganye enamavili inompu ongashenxiyo kunye nayo kwaye ihlala isibini samantongomane aviliweyo, ukuba kunokwenzeka.
Ukubeka kwakhona: Ikhaka leplastikhi elikhanyayo lifakelwe phakathi kokugcwalisa nangasemva kwemoto ukukhusela nakuphi na ukubaswa kwepetroli okufikelela kufikelela kwishushu. (Isekuhleni ukuze indoda elolipop ikwazi ukubona ngayo kwaye yazi xa ivili langemva lasekunene liqhotyoshelwe.) Ii-refueller ezimbini zincamathelisa ithumbu kwifiller yemoto. Omnye uphatha umbhobho ngokwawo, omnye uxinzelela kwisiphatho sendoda efileyo ekufuneka igcinwe phantsi ukuze amafutha akwazi ukuhamba. Ngokukhawuleza xa esi sibambo sikhululwa-njengoko bekunokuba njalo ngendoda ibalekayo, umzekelo - amafutha ayayeka ukuhamba. Ubunzima buhambisa inani elichanekileyo lamafutha acwangcisiweyo, kwinqanaba leelitha ezili-12 ngomzuzwana.
I-Fuel iyancipha ngevolumu xa ibanda, isenza ukuba ngaphezulu kubekhona kwilitha nganye. Imigaqo ivumela ukuba ipetroli ibandiswe ukuya kwi-10 degrees C ngaphantsi kweqondo lobushushu.
ipilisi ebomvu l 7
I-rig ibekwa mgangathweni mnye kwaye ibonelelwa libhunga lolawulo kumaqela angavumelekanga ukuyiguqula nangayiphi na indlela. Okuncanyathiselwe embombeni okanye kwiminqwazi yokufaka izinto zokwenza refuellers zizalathi ezibonisa xa ipetroli ihamba naxa inkqubo igqityiwe. Ngokukhawuleza nje xa ezi zikhombisi zixelela abagcwalisi ukuba imoto igcwele, bakhulula i-latch ebambe umlomo kwi-filler kwaye basebenzise isibambo sesibini ukukhupha umlomo kwisidibanisi semoto. Ukongamela wonke umsebenzi ngamalungu amabini abasebenzi, elowo unesicima-mlilo seelitha ezingama-60. Amathumbu amakhulu omlilo asondele kwigaraji. Olunye uphawu lokhuselo kwiroli yezibaso yimicu yomhlaba efakwe kwizintambo zokuthambisa amafutha kunye nokunciphisa amathuba okuphuma kombane ongashukumiyo - okungafunekiyo kakhulu kuwo onke la mafutha.
I-Lollipop phezulu: Indoda ye-lollipop, ebukele wonke umsebenzi ngononophelo, iphakamisa i-lollipop. Wenza oko kuphela xa anelisekile kukuba omane amavili adityanisiwe, ukugcwaliswa kokugcwaliswa, umbhobho osuswe emotweni, kwaye enye imoto ayikuko ukuba isendleleni yendoda yakhe. Kuphela kuxa umqhubi enokuhamba.
Indlela yokuphuma emngxunyeni: Umqhubi, ngelixa elinde abasebenzi ukuba bagqibe, uya kuba exhobile ngokulawula. Ukulawulwa kokumiliselwa, kwikhonsathi kunye nomda wakhe wesantya somda, kulawula ukubaleka kwakhe. Njengoko ewela umgca obonisa isiphelo somda wesantya somjelo ushenxisa umda wesantya kwaye akhawulezise nzima ukubuyela kwisantya somdyarho, enakekele ukuba angaweleli umgca omhlophe olandelayo- lowo ubonakalisa indlela yokuphuma ibuyele kwindlela - Phambi kokuba afike esiphelweni sendledlana yomhadi uqobo. Ukusilela ukuhlonipha oku kuya kuzisa isohlwayo.
isetyenziselwa ntoni i-nystatin cream
isulfameth / itrimethoprim 800 / 160mg tb
Olona nyango luphambili lokuxhalaba ekuhlaleni
yintoni idatha ehamba nge-Android
indlela yokuqhuba ishishini
ngaphaya kwekhawuntari ngesiyezi